Notes from underground: Zimbabwe elections: is media optimism justified?
For the last couple of days we've seen headlines announcing that Mugabe's repressive regime has fallen, and that the MDC has won the elections in Zimbabwe. Only when one reads the small print does one discover that this is based on guessing, wishful thinking and speculation.
Three members of the Young Communist League's Zimbabwean election observer team have returned early because of constant surveillance amounting to intimidation by Central Intelligence Officers (CIO).
'This shows the level of intimidation that is still prevalent in Zimbabwe,' it said.
Labels: election observers, Robert Mugabe, SACC, Zimbabwe, Zimbabwe elections